Ubomi bemihla yangomhla wesiRashiya buneenkxalabo zemihla ngemihla ezibangelwa kukungahlali okungekho nto, ukuphikisana kwezentlalo, ukuxhatshazwa komsebenzi, ukungabikho kwemali rhoqo. Ukuzama umgangatho ophezulu okanye ophantsi wokuhlala nokuzinza kwezezimali, ngamanye amaxesha asinaso ixesha lokubona indlela abantwana bethu bakhula ngayo. Kwaye siyazibuza ukuba: lo mbono kunye nokunganakwa kuvela phi? Ngaba kukho indlela yokuphuma kule meko? Yeka ukwenza imali akunakwenzeka - ngaphandle kwabo awuyi kuhlala. Emva koko, mhlawumbi kungcono ukuba ungaba nabantwana, ukuze ungakhulisi uthando olungathandekiyo, olusweleyo kunye nesidalwa se-caress? Siza kuzama ukuqonda zonke iintlanzi namhlanje. Umxholo wencoko yethu yanamhlanje "isiluleko sengqondo kubazali abanalo ixesha elincinane labantwana."
Kufuneka nje ukuba uthathe amanyathelo athile anokukunceda ukuba wenze inkqubo yemfundo, nokuba kude, kunye nokugcina ulwalamano oluthembekileyo nomntwana wakho. Iingcebiso zengqondo yengqondo ziyakunceda kule nto.
Okokuqala, kufuneka ucinge ngenyameko malunga nento oyenzayo nomntwana ekungabikho kwakho ukuba ungenayo ixesha elaneleyo. Abantwana, ingakumbi abaselula, kunzima ukunyamezela uxolo kunye nokuxhalabisa - ngokusondele kwinkampani embi, izinto ezimbi. Kumahhala kwi-kindergarten okanye esikolweni kunye nokwenza umsebenzi wesikolo, umntwana angatyelela ama-mugs okanye amacandelo ezemidlalo. Ngaba unayo ixesha lokuhamba naye apho? Ngoko ke maza kunceda izihlobo! Ootatomkhulu, oomama, oomama okanye abantwana abadala kufuneka bangashiyi abazali babo ngaphandle kokuncedisa ngexesha elifanelekileyo. Ukuba uhlala ekhaya, kodwa imisebenzi yasekhaya ayikuniki ithuba lokudlala okanye ukuthetha nomntwana, kuya kulungele ukucela uncedo. Makhe enze umsebenzi ogqithiseleyo-obaluleke kakhulu, kufuphi nawe. Akukho nto idibanisa njengebhizinisi elidibeneyo. Ngaphezu koko, kulula ukuthetha emsebenzini.
Okwesibini, musa ukuphazamisa umntwana. Abazali abaninzi abaziva benetyala ngokunikela ixesha elincinane kubantwana baqala, oko kuthetha, "ukuhlawula" ngezipho ezibiza. Le nto ayiyona into eyingozi-nokuba yingozi! Ukuqhelana nale meko yemicimbi, umntwana uya kufumana ukuzaliseka kwayo yonke iminqweno yakhe njengomsebenzi wakho othe ngqo kwaye uya kuthatha. Ngoku khawucinge ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba ngokukhawuleza awukwazi ukuzalisekisa enye into? Ukunyaniseka, inqanaba le ntlekele kunzima ukulihlola! Ezinzulwini zobomi, ngamnye umntwana uyaqonda: akuyiyo yonke into ayicelayo, uyayidinga kwaye uyayiluncedo. Iimfuneko zokwandisa - ukuhlolwa koxinzelelo lwabazali ngokuhambelana nokufundisa.
Okwesithathu, musa ukwenza izithembiso ezingenangqiqo. "Namhlanje andinakuyidlala nehoksi kunye nawe, kodwa ndiya kuyenza kwangomso," ngokuqhelekileyo amagama anjalo aphuma kwiilwimi zawo. Kodwa ufika ngomso kwaye usuphelile emsebenzini, unalo ixesha elincinci labantwana, ngoko, emva kokuhamba ekhaya, ufumana izinto ezininzi eziphuthumayo, kwaye ugijime ... Kwaye ubusuku buza buthule. Kwaye umntwana walinda. Ukuba le meko iphinda izihlandlo eziliqela, umntwana wakho ulahlekelwa yikholo kuphela kubazali, kodwa nangenyaniso nangobulungisa.
Enye ingongoma: ungabandakanyi ukubaluleka kakhulu kumagama omntwana onjengaye "Ndingakuzonda." Abantwana asithethi oko kuvame ukuthetha ngala magama. Bafuna nje ukuzisola ngesenzo esenziwe.
Soloko ufumana ixesha, inzala xa unento encinane, kunye nesibindi sokuba uphendule nemibuzo engenangqiqo. Khumbula ukuba ukuba uzama ukuphepha iingxoxo ezinjalo, umntwana uya kufumana ulwazi alufunayo, umzekelo, kwisitalato okanye kwi-intanethi. Akunzima ukuqagela ukuba imbonakalo ephosakeleyo yezinto ezininzi ezintle zingenza njani!
Musa ukucinga ukuba kuya kuba mnandi kakhulu ukuba umntwana abe rhoqo phantsi kolawulo lwakho oluqaphileyo. Kwakhona ufuna ukuzimela. Ukugxininisa ukubaluleka kwezakhono ezifunyenwe ngumntwana ngokunxulumene neemfuno zokuba yedwa ekhaya-ngokwenene, amandla okusebenzisa i-microwave okanye isitofu segesi ihlala isiluncedo.
Into ephambili ayikho isixa esichithwa kumntwana, kodwa indlela ochitha ngayo. Naliphi na umzuzu owongezelelweyo kunye, uchithe kakuhle. Makube yintetho yentliziyo-intliziyo okanye umdlalo omfutshane odibeneyo, ubukele ifilimu ethandekayo okanye uhambahamba kwisikwere esiseduze. Ngaba yayingumhla? Qalisa ukunyuka! Ndikholelwe, iinkumbulo zeebhatatesibhaka eziphekiweyo okanye i-shish kebab eziphekweyo kwaye zidliwe kwimeko kunye nenkampani kunye nabazali ziya kuhlala zikhunjulwe kumntwana, kunye nokubulela ixesha elide lichithe! Ngomhla wobusika, uququzelele ukuthungatha okanye ukushushuluza, udlala iinqwelo zeqhankqalazi okanye udwebe iqonga leqhwa-kwaye luncedo kwimpilo, kwaye luqinisa ubuhlobo bentsapho!
Kwaye, ekugqibeleni, ungazigxeka ngokuba ungakwazi ukuchitha ixesha elininzi nomntwana wakho. Menze nje azive enothando lwakho, bonisa intlonelo ngeemvakalelo zakhe kunye namava. I-Caress, ububele, ubulungisa, isimo sengqondo esinobubele, ukukwazi ukuphulaphula nokuxhaswa kumzuzu onzima kufuneka ube ngabahlobo bakho abathembekileyo kwimeko yokukhuphula indoda ekhulayo.
Siyathemba ukuba uya kuthatha isiluleko sengqondo sengqondo kubazali abanalo ixesha elincinane labantwana, kodwa abafuna ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokufundisa umntwana wabo.
Ngendlela efanelekileyo ukufunda ukufunda umntwana?
Inkcubeko yobudlelwane kwisifundo phakathi kootitshala kunye nabafundi
Iifestile zeglasi ezinemibala engqambileyo yefestile yangaphakathi
Isaladi kaKhesare ngeemfucu
Umhlobo kaVladimir Friske uya kuqinisekisa ubungqina bakhe malunga noPlato
UVika Daineko: "Andizange ndenze okubi kubantu ..."
Izingane Pugacheva kunye neGalkin iphupha leenkomo kunye nokuqeqesha, ividiyo
Izityalo ezihlala ngaphakathi
Uthando luya kuhlala luqala ngomnqweno
Ukuzalwa kweNkosi 2016: umhla womthendeleko, iziganeko, izithethe
Indlela yokwakha nokugcina ubudlelwane obuhle